Inosviba mamiriro muIOS 13 chengetedza hupenyu hwebhatiri? Hongu uye chaizvo | IPhone nhau
IOS 13's yakasviba modhi inochengetedza hupenyu hwebhatiri? Hongu uye zvakawanda
Imwe yezvinhu zvitsva zvakauya kubva paruoko rweIOS 13 inowanikwa mune yakasviba modhi, yakasviba modhi iyo yaigara iri imwe yezvinodiwa zvevashandisi kwemakore akati wandei, asi izvo hazvina kuita chero chirevo sekureba sekunge zvidzitiro zvakashandiswa neApple pa iPhone zvichiri LCD.
El Iyo yekutanga iPhone yekumisikidza OLED skrini yaive iyo iPhone X. Kubva ipapo maPhones matsva, kunze kweiyo iPhone XR uye iPhone 11, ese ane OLED skrini. Musiyano mukuru pakati peLCD skrini neOLEDs ndeyekuti iyo yekupedzisira chete batidza Ma LED anoratidza rumwe ruvara kunze kwechitema.
Ndokunge, kana iwo mashandisiro atinoshandisa achitipa iyo chaiyo yakasviba modhi, hapana chakasviba grey sekumwe kumwe kunyorera kunopa, kwete ese maLED pachiratidziri anozopenya, asi izvo chete zvinoratidza rimwe ruvara kunze kwechitema zvinoshandiswa, izvo zvakare zvinotibvumidza isu kunakidzwa zvakanyanya zvakanyanya vatema.
LCD skrini jekesa iyo pani yacho kuratidza chero ruvara kusanganisira demaNaizvozvo, iko kusevha kwatinogona kuwana neOLED skrini hakumbofi kwakawanikwa mumidziyo ine mhando iyi yepaneru. Kuti vatiratidze chiri kuchengetedza bhatiri iyo iyo yakasviba modhi inotipa isu, vakomana vePhoneBuff vakaita muyedzo wekushandisa kweiyo iPhone XS, zvese zviri murima modhi uye nemwenje mode.
Kuita kuti muyedzo uve wechokwadi sezvazvinogona, zvese zviratidziro zvakagadzirirwa kuratidza 200 nits dzekupenya, chimwe chinhu chinopa zvine musoro kuti bhatiri rinogara kwenguva yakati rebei kana shoma. Zvinoenderana neiyi bvunzo, iyo iPhone XS ine skrini ine yakasviba modhi yakavhurwa Inotipa 30% bhatiri kuchengetedza.
Rima modhi haina kukodzera kushandiswa masikati machena, saka kana iwe uchida kusevha bhatiri, chinhu chakanakisa chaungaite kuronga mashandiro mune ino modhi, kuitira kuti iite simba panguva yemadekwana uye isabate mambakwedza, aya ndiwo marongedzero andakaita.
Uye zvakare, maficha ayo atove kutsigira iyi modhi, zvinoshandiswa uye zvakagadziriswa maererano nekugadzirisa kwegadziriro, saka haufanire kunetseka nezvekuimisikidza uye kuimisa nemaoko.
1 Maitiro ekumisikidza rima maitiro mu iOS 13
2 Maitiro ekumisikidza iyo Night Shift basa pane iyo iPhone / iPad
2.1 Midziyo inoenderana neiyo Night Shift basa
3 Rima modhi kana Husiku Shift zviri nani?
4 Chii chinonzi Toni Yechokwadi?
Maitiro ekumisikidza rima maitiro mu iOS 13
Kana iwe uine iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro uye iPhone 11 Pro Max inogonesa kana kuronga mashandiro aya nenzira iyi ichakubvumidza iwe kuti uchengetedze huwandu hwakawanda hwebhatiri, chero bedzi mashandisiro atinoshandisa akagadziridzwa kuita iyi modhiyo uye kuratidza yechokwadi nzira yakasviba, iine ruvara rwemberi zvachose nhema.
Maviri ezvishandiso zvinoshandiswa zvakanyanya, senge WhatsApp uye Facebook, iwe waida pasi peMark Zuckerberg amburera haitsigirwe mune iyi modhi, zvisinei, Instagram hongu ndizvo uye zvishoma zvishoma pasi pevhiki.
Para batidza nzira yakasviba muIOS 13Zvisinei neiyo iPhone kana iPad modhi iwe yaunayo, iwe unofanirwa kuita anotevera matanho:
Kutanga, tinokwira kumusoro Zvirongwa (giya vhiri rinoratidzwa pachiratidziro chemumba che iPhone yedu).
Tevere, tinya pane Screen uye kupenya.
Pamusoro, iOS 13 inotibvumidza kuti tione kana tichida kushandisa light mode kana yerima modhi. Chaizvoizvo chinotevera, isu tine sarudzo yeku seta mashandiro ayo otomatiki (kuburikidza nehurongwa kana kujekesa kusvika madekwana uye kwasviba pahusiku).
Iri basa haritsivi basa reNight Shift, basa iro isu tinokwanisa zvakare kuronga mashandiro aro uye iro rinoita kuti yero isvike kubvisa matoni ebhuruu ayo, maererano nezvidzidzo zvakasiyana, kukanganisa kurara mhando, kunyanya, kana isu takatarisana nemhedzisiro yayo maminetsi tisati tarara.
Maitiro ekumisikidza iyo Night Shift basa pane iyo iPhone / iPad
Para shandisa iyo Night Shift basa kana kuronga mashandiro ayo, tinogona kuzviita zvakananga kubva paScreen uye nekupenya sarudzo yemudziyo wedu.
Isu tinowana sarudzo dzekumisikidza yeIOS 13 (mune ino kesi kunyangwe iri zvakare inowanikwa mushanduro dzakapfuura) kuburikidza Zvirongwa.
Tevere, isu tinoenda kune iyo sarudzo Husiku Shift.
Muhwindo rinoratidzwa pazasi, isu tine sarudzo yekumisa mashandiro eiri basa kuburikidza nechero chirongwa. Tinogona zvakare kumisikidza kana tichida iyo yeyero firita yakashandiswa pachiratidziri kuve zvakanyanya kana zvishoma zvakanyanya.
Midziyo inoenderana neiyo Night Shift basa
Iyo Night Shift basa rakauya kubva paruoko rweIOS 9, uye inowirirana neyese iPhone uye iPad mamodheru ayo anotarisirwa ne 64-bit processor, saka akura mamodheru ese ari maviri iPhone nePad iyo inowirirana nebasa iri i iPhone 5s, iPad Mhepo uye iPad mini 2.
Rima modhi kana Husiku Shift zviri nani?
Ose akasviba maitiro uye Night Shift basa aya mabasa maviri akasiyana zvachose kuti vakwanise kuzadzikiswa uye kuita mabasa ese ari maviri akaitwa pamwechete. Sekureva kwaAna Cox, purofesa paUniversity College London, hapana humbowo hwesainzi hwekuti rima modhi inoderedza eyeestrain, chimwe chinhu chinoita iyo Night Shift kana Night Light modhi.
Iyo yakasviba modhi inotsiva kumashure machena nechena, ichichinja iwo mavara kuti aratidzwe chena, zvisinei, kupenya kwesimba kwechinyorwa hakuderedzwe, saka kana tichigadzira iyo nzira yakasviba, isu tisingashandise iyo Night Shift modhi, kuneta kunoonekwa kunotidzivirira kuti tisarara kunoramba kuripo.
iOS 13 inotibvumidza kuti tishandise ma modhi ese pamwechete, kunyangwe isu tichigona chete kugadzirisa iyo yakasviba modhi kuti ishandise uye isabude zvichienderana nekuti masikati kana husiku. Nekudaro, iyo Night Shift basa inofanirwa kuronga mashandiro, ichiseta iyo nguva yatinoda kuti itange kudzikisira iro rebhuruu uye kwatinoda kuti rimire.
Chii chinonzi Toni Yechokwadi?
Rimwe basa iro razvino michina ye iPhone rinotipawo isu ndeye TrueTone basa, basa rine basa rekugadzirisa iwo mavara anoratidzwa pachiratidziro kuti agadzirise iwo kune ambient mwenje wenguva uye izvo gara wakatendeka sezvinobvira kuchokwadi. Iri basa hariwanikwe chete pane iyo iPhone, asi isu tinogona zvakare kuiwana pane iyo iPad.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » IOS 13's yakasviba modhi inochengetedza hupenyu hwebhatiri? Hongu uye zvakawanda
Waiziva here kuti Apple yakaviga mheni yekubatanidza paApple TV?
YouTube inowedzera HDR rutsigiro kune yayo iPhone 11 app